गाडी किन्ने बजेटबाट कनकाईका मेयरले खोले इन्जिनियरिङ कलेज – Loktantra Post Loktantra Post
Published On : 17 July, 2020 11:08 am
गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कनकाई नगरसभाले नगरपालिकाको प्रमुख चढ्नका लागि रु. ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर नगरप्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले लाखौं खर्चेर आफ्ना लागि सवारी साधन खरिद गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरे । ‘बजेटमा रकम छुट्याइएको थियो, मेयरले सवारी साधन किन्न मान्नुभएन,’ कनकाईकी उपप्रमुख मञ्जु प्रसाईले भनिन्, ‘त्यसपछि गाडी किन्ने बजेट प्राविधिक शिक्षालय स्थापनामा खर्च गरियो ।’
नगरलाई शैक्षिक हब बनाउने र रोजगारीमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने योजना अनुरुप नगरप्रमुख पोखरेलले नै इन्जिनियरिङ विषयको पढाई हुने कलेज खोल्ने प्रस्ताव अघि बढाए । अहिले त्यही सवारी साधन किन्ने भनिएको बजेटबाटै सुरु भएको कनकाई पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट सञ्चालनमा छ ।
नगरपालिकाले गाडी खरिदका लागि बिनियोजन भइसकेको रु. ६० लाखमध्ये रु. ३० लाख रकम कनकाई पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट स्थापनाका लागि लगानी गरिएको र अरु रकम साइकल लेन र पुल निर्माणमा छुट्याइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।
कनकाई–७ दुर्गापुरमा सञ्चालित कनकाई पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूटमा पहिलो ब्याचमा ४६ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । त्यहाँ सीटीइभीटी अन्तर्गतको ३ वर्षे डिप्लोमा तहको सिभिल इन्जिनियरिङ, जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ र इन्फरमेसन टेक्नोलोजीको पठनपाठन हुँदै आएको छ ।
सो इन्स्टिच्यूटलाई नगरपालिकाको सहयोग र विश्वविद्यालयहरुको सम्बन्धनमा सामुदायिक साझेदारीमा आधारित इन्जिनियरिङ कलेजको रुपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको नगरप्रमुख पोखरेलले बताए ।
नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा समेत कनकाई नगरपालिकाले सो इन्स्टिच्युटका लागि रु. ३० लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । नगरप्रमुख पोखरेलका अनुसार नगरको वडा नं. ५ मा इन्जिनियरिङ कलेजका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न १६ बिगाहा जग्गा लिजमा लिने कार्य भइसकेको छ ।
यो परियोजनालाई नगरको गौरव आयोजनामा समेटिएको छ । यहाँ अध्ययन गर्ने स्थानीय विद्यार्थीलाई नगरपालिकाले नगरभित्रै रोजगारी दिलाउने सोच समेत बनाएको छ । ‘कमाईका लागि शिक्षा’ कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक विद्यार्थीलाई निर्माणाधीन परियोजनाहरुमा पारिश्रमिक दिएर काम गराउँदै सिकाउने नयाँ कार्यक्रम अघि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिका स्थापना हुँदा प्रदेश सरकारले कनकाईलाई एउटा सानो पुरानो जीप दिएको थियो । अति आवश्यक पर्दा नगरप्रमुख र उपप्रमुखले त्यही गाडी प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ ।
नगरप्रमुख पोखरेल कहिलेकाहिँ घरबाट साइकल चढेर नगरपालिका आउनुहुन्छ भने नजिक फिल्ड जाँदासमेत उनले साइकल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
‘साइक्लिङ कल्चर बनोस् भनेर साइकलको प्रयोग गरेको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘सानो आम्दानी भएको नगरपालिकाले गाडी खरिदमा लाखौं खर्च गर्नहुँदैन भन्ने हाम्रो सोच हो ।’
नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा गाडी खरिदका लागि छुट्याइएको बजेट रकमान्तर गरेर रु. ६ लाख साइकल लेन निर्माणमा लगाउने तयारी गरेको थियो । तर कोरोना कहरका कारण साइकल लेनको निर्माण नयाँ आर्थिक वर्षमा मात्र हुने भएको छ ।